Ururada bulshada Gaalkacyo oo baaq ka soo saaray Amaan sugida Gobolka Mudug – SBC
Ururada bulshada Gaalkacyo oo baaq ka soo saaray Amaan sugida Gobolka Mudug
Posted by Webmaster on Diseenbar 26, 2011 Comments
Qeybaha kala duwan ee Bulshada Ururada ka shaqeeya nabada iyo kuwa Haweenka ayaa soo saaray baaqyo ku aadan sugida Amaanka Gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo.
Waxay ugu baaqeen dhinayadaasi laamaha Amaanka Maamulada Puntland iyo Galmudug ee ka wada arimiya Magaaladaasi Gaalkacyo in ay ka shaqeeyaan si wada jir ah Amaanka gobolka kana hortagaan waxii amniga wax u dhimaya.
Waxay sidoo kale uga mahad celiyeen ciidamada Amaanka oo maalmihii la soo dhaafay koonfurta gaalkacyo ka bilaabay Howlgalo amaanka lagu sugayo taas oo ay hubka shacidarada iyo cid kastoo amaanka wax u dhimeysa kaga hortagayay.
Waxaa maalmihii la soo dhaafay jiray kulamo ay isugu imaanayaan waxgaradka iyo Shacabweynaha gobolka kuwaas oo looga hadlayay sidii amaanka wax looga qaban lahaa, iyagoona ugu dambeyntii soo saaray baaqyo ay maamulada gobolka uga jeedinayaan sidii ay siwada jir ah amaanka u sugi lahaayeen.
Ma ahan marki ugu horysay oo ay kulamo lagu sugayo Amaanka ama quseeya Nabada ay ku yeeshaan gudaha Gaalkacyo ururada Bulshada Sida Haweenka iyo shacab weynaha gobolka.